Abaalmarinta Cusub ee Dalxiiska Qaaradda oo ay soo bandhigeen Guddiga Dalxiiska Afrika
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Tansaaniya » Abaalmarinta Cusub ee Dalxiiska Qaaradda oo ay soo bandhigeen Guddiga Dalxiiska Afrika
Safarka Dalxiiska • Guddiga Dalxiiska Afrika • Wararka Ururada • Awards • Botswana Breaking News • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Wararka Itoobiya • Ghana War Degdeg ah • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Shirka Warka Warshadaha • Shirarka • News • Wararka Nigeria • Dadka • Wararka Qadar • Wararka Tansaaniya • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Abaalmarinta Dalxiiska Qaaradda ee Guddiga Dalxiiska Afrika
Iyada oo la aqoonsan yahay hawsha sharafta leh ee ay qabteen madaxda dawladda Afrika iyo shakhsiyaadka kale ee muhiimka u ah horumarinta iyo kor u qaadista dalxiiska Afrika, Guddiga Dalxiiska Afrika (ATB) ayaa abaalmarinnada Dalxiiska Qaaradda guddoonsiiyay qaar ka mid ah hoggaamiyayaasheeda.
Xukunka ATB -da, wufuud ka socota dibadda Afrikada Bari ayaa ka qaybgalay Bandhigga. Waxaa ka mid ahaa wakiilo ka socday Itoobiya, Botswana, Nigeria, Ghana, iyo Qatar.
Hay'adda dalxiiska ee qaaradda ayaa abaalmarino guddoonsiisay shaqsiyaad muhiim u ah Afrika oo ka dambeeya horumarinta dalxiiska iyo guusha.
Abaalmarinta Qaaradda Afrika ee ATB waxaa la guddoonsiiyay shaqsiyaad ka kala yimid dhammaan aagagga juqraafiyeed ee Afrika.
Qofkii ugu horreeyey ee helay Abaalmarinta Dalxiiska Qaaradda Afrika ee ATB 2021 wuxuu ahaa Madaxweynaha Tansaaniya, Samia Suluhu Hassan, iyada oo loo aqoonsaday sida hagar la’aanta ah ee ay uga go’an tahay oo ay gacan uga geysatay horumarinta kaddibna kor u qaaddo dalxiiska Tansaaniya.
Soo bandhigida kuwan Guddiga Dalxiiska Afrika (ATB) Abaalmarinta ayaa dhacday Sabtidii intii lagu guda jiray furitaanka rasmiga ah ee Bandhigga Dalxiiska Gobolka ee Bariga Afrika (EARTE) oo ka dhacaya magaalada Arusha ee Waqooyiga Tansaaniya.
Madaxweynuhu wuxuu hagayey diyaarinta dokumenteriga Dalxiiska ee Boqortooyada oo ka mid ah Tansaaniya goobaha dalxiiska, oo ay ka mid yihiin hindisayaal kale oo uu Madaxweynuhu qaaday si kor loogu qaado horumarinta dalxiiska ee Tansaaniya iyo Afrika.
Guddiga Dalxiiska Afrika waxaa loo xilsaaray inuu kor u qaado una fududeeyo kobaca dalxiiska iyo horumarka qaaradda oo dhan.
Isagoo guddoonsiinaya abaalmarintiisa qaaliga ah Madaxa Dawladda Tansaaniya, Guddoomiyaha ATB Mr. Cuthbert Ncube, ayaa sheegay in hoggaamiyaha Tansaaniya uu hubiyay in warshadaha dalxiisku ay dib u soo laabteen intii uu socday aafada COVID-19.
Wasiirka Khayraadka Dabiiciga ah iyo Dalxiiska ee Tanzania, Dr. Damas Ndumbaro, ayaa ku guddoomay abaalmarinta magaca Madaxweynaha.
Dadka kale ee la ixtiraamo ee Abaalmarinta Qaaradda Afrika ee Guddiga Dalxiiska Afrika ee 2021 waxaa ka mid ahaa Wasiirka Dalxiiska iyo Dhaqanka ee Sierra Leone, Dr. Memunatu Pratt, oo ka mid ahayd shakhsiyaadka muhiimka ah ee ka soo qaybgalay EARTE oo ka yimid meel ka baxsan bahweynta Bulshada Bariga Afrika (EAC).
Markii ay heshay abaalmarinta, Dr. Pratt waxay sheegtay inay ku faraxsan tahay inay ka qeyb gasho EARTE ayna ku faraxsan tahay inay aragto bandhigyo dalxiis goboleed oo noocan oo kale ah Afrika. Waxay fikrado u diri doontaa dawladaha Galbeedka Afrika si ay u sameeyaan bandhig dalxiis oo la mid ah.
Dadka kale ee ugu sarreeya abaalmarinta ATB ayaa ahaa Wasiirka Kheyraadka Dabiiciga ah iyo Dalxiiska ee Tanzania, Dr. Damas Ndumbaro; Mudane Najiib Balaala, Wasiirka Dalxiiska Kenya; Mr. Moses Vilakati, Wasiirka Dalxiiska ee Boqortooyada Eswatini; iyo Wasiirka Dalxiiska Botswana, Philda Kereng.
Bandhigga Dalxiiska Gobolka EAC ee sannadlaha ah ayaa bilaabmay Sabtidii, Oktoobar 9 -keedii, wuxuuna soconayaa ilaa maanta, Oktoobar 11. Ka -qaybgalayaasha waxaa la siinayaa fursad ay ku booqdaan goobaha dalxiiska ee muhiimka ah ee Tansaaniya ilaa 16 -ka Oktoobar, oo ay ku jiraan meelaha duurjoogta ah ee caanka ah.
Bandhigga Dalxiiska ee gobolka, oo ah kii ugu horreeyay ee noociisa ah, oo lagu qabto gobolka Bariga Afrika, ayaa looga golleeyahay in lagu dhiirrigeliyo goobaha dalxiiska ee laga heli karo dalalka xubnaha ka ah EAC ee Tanzania, Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, iyo Koonfurta Suudaan.